मलाई फाँसी दे सरकार ! | काव्यालय
मलाई फाँसी दे सरकार | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by रमेश भण्डारी July 18, 2020
श्रीमान् न्यायाधीश ज्यु,
आशा छ यो कागजमा देखिने कालो मसीले कोरिएका अक्षरहरु हजुरले पढ्ने कष्ट गर्नुहुनेछ अनि महिनैपिच्छे रगतको मसीले रंगिने अदृश्य कागजका र कात्रोमा लम्पसार परेका मृत शरीरहरुको संख्यामा कमि ल्याउनुहुनेछ ।
सदाझैं त्यस रातपनि ऊ मेरो कोठामा आएकी थिई । घरभन्दा टाढा बसेर दिउँसोभरि काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ऊ मसँगैको कोठामा बस्ने गरेतापनि ऊ हर रात म कहाँ आउँथी, खाना बनाउँथी, खुवाउँथी, आफू पनि खान्थी अनि एउटा कुनामा सुत्थी । त्यस अन्धकार र निर्जीव कोठालाई ऊ सधैँ सफा, सुन्दर र सजीव बनाउने कोसिसमा लागिरहन्थी । अरु रातभन्दा निकै फरक थियो त्यो रात; मैले पानीसँग मिसाएर पिउन सुरु गरेको रक्सी पानीसरह पिउँदै थिएँ । म नसाको मातमा बेहोस अवस्थामा थिएँ अनि ऊ जवानीको रापमा अचेत; मन र मुटु धेरै अगाडि नै साटिसकेता पनि धेरैपटक उसले आफ्नो जवानी मलाई सुम्पिने प्रयास गरेकी थिई । सधैँ उसको त्यो प्रस्ताव नकार्दै आएको म त्यस रात मदिराको मातमा उसलाई शारीरिक सुख दिन पुगेँ ।
बिहानीपख आँखा खोल्दा बाहिर हो-हल्ला थियो, ऊ छेउमा बसेर रोइरहेकी थिई । एकैछिनमा प्रहरीको एक हुल जमातले मलाई हतकडी लगाएर गाडीमा कोच्यो । के भइरहेछ, म आफैलाई केही होस थिएन । म आफ्नै प्रेमिकालाई जबर्जस्तीकरणी गरेको झुटो आरोपमा गिरफ्तार भएको रहेछु । “बलात्कारजस्तो अमानवीय काम, त्यो पनि म बाट ! मलाई फसाउने सुनियोजित षड्यन्त्र हो यो, म निर्दोष छु । एकपटक उसैलाई सोध्नुहोस् सबैकुरा खुलस्त हुनेछ ।” यहि कुरा मैले प्रहरी अनि आँखाभरि आँसु लिएर जेलमा भेट्न आएका मेरा लाचार र विवश बुवालाई रुँदै भनेँ । तीन दिन पश्चात हजुरको अदालतमा मलाई हाजिर गराउने क्रममा बाटोभरि महिला अधिकारकर्मीहरु चर्को स्वरमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’, ‘महिलालाई खुलेआम बाँच्ने अधिकार दे’, ‘बलात्कृतलाई न्याय दे’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए । न्यायकी देवीका आँखामा बाँधिएको कालोपट्टी हजुरको आँखामा पनि बाँध्न सफल भई ऊ ।
च्यातिएको कुर्ता, गहभरि आँसु, शरीरभरि दाग, बारम्बार मैले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै उसले गरेको विश्वस्तरिय अभिनयमा त उसले पुरस्कार नै पाउँथी होला, म प्रमाणविहीन लाचार अपराधी साबित हुनु ठूलो कुरा नै थिएन । उसले प्रेमको सहायताले आफ्नो जवानीको आगो त निभाई नै साथमा मलाई जिन्दगीभर जिउँदै जलाउने आगो सल्काई । केही पैसाको लालचमा परेर उसले प्रेमलाई बद्नाम त गराई नै साथमा मेरो परिवार र मलाई पनि । सयजना अपराधी छुटुन् तर एकजना निर्दोषले सजाय भोग्नु नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हजुरको न्यायालयले आफ्नै प्रेमिकाको राजिखुसीमा बिताइएको त्यो रातलाई कहालीलाग्दो रात ठहर्याई बलात्कार जस्तो जघन्य र अमानवीय अपराधको आरोपमा २५हजार जरिवाना सहित ५ वर्षको कारावासको सजाय सुनायो मलाई ।
मैले म निर्दोष छु साबित गर्न यो पत्र कोरेको भने होइन । मलाई सुनाइएको सजाय मेरो निम्ति थियो या मेरो परिवारको निम्ति ? बलात्कारको आरोपी मात्र म हुँ, त्यसको सजाय मैले भोगिरहेको छु फेरि किन मेरो परिवारले पनि त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने ? बाटोमा हिडँदा मेरो भाइलाई देखेर छिः छिः र दूरदूर गर्नेदेखि लिएर भाग्ने अनि बहिनिलाई टोल-टोलमा बलात्कार कस्तो हुन्छ हामी देखाइदिन्छौ भन्दै धम्काइँदा कहाँ छन् मानवअधिकार र महिला अधिकारको वकालत गर्नेहरु ? बलात्कृत ठहरिएकी ऊ कहीँ हाँसीखुसी जिन्दगी जीउँदै छे तर यहाँ हरेक दिन बलात्कृत मेरो परिवार भइरहेको छ । मानवअधिकार र महिला अधिकार अपराधीको परिवारको लागि हुँदैन ? गरेकै हुँ भने अपराध मैले गरेको हुँ, मेरो परिवारले होइन । समाजको कुनैपनि कार्यमा सरिक हुन पाउँदैनन् मेरा बुवाआमा । मैले गरेको बलात्कारको सजाय मेरो परिवारलाई किन दिइन्छ सरकार ?
बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, “भोलिपर्सी म समाजमा तेरो बाउ हुँ भनेर चिनिन चाहन्छु।” आज सारा समाजले उहाँलाई बलात्कारीको बाउ भनेर चिन्दछ । के बलात्कारीको परिवारचाहिँ मानव होइनन् ? उनीहरुको चाहिँ मानवअधिकारको सुरक्षा जरुरी छैन र महोदय ?
“वास्तवमा आत्महत्या बहादुरले मात्र गर्न सक्छ्न, तँ ठिक रहेछ्स् छोरा । कायरले कहिल्यै आफूलाई मार्न सक्दैन । तँ निर्दोष छ्स् त्यो हामी सबैलाई थाहा छ तरपनि हामीले तेरोलागि केही गर्न सकेनौँ, माफ गरिदे हामीलाई । तेरो यो बूढो बाउ, आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम समयतिर बदनामी सहँदै हिँड्न सक्दैन छोरा, तेरा भाइ-बहिनी सधैँ मुख लुकाएर समाजमा हिँड्न सक्दैनन् । तेरी बुढी भइसकेकी आमालाई आफ्नै कोखलाई धिक्कार्न बाध्य बनाएको छ यो समाजले, तँजस्तो छोरो जन्माएकोमा । घरबाट कतै गएर घर आइपुग्दा तेरी बहिनी भाग्दै आउँछे ।बलात्कारको सजाय तैले भोगिरहेको छ्स् तर यहाँ हाम्रो बलात्कार दिनदिनै भइरहेको छ । तेरो बुवा भएर चिनिने मेरो सपना तैँले पूरा त गरिदिइस तर यति ठूलो अपमान सहेर बाच्न भने तेरो बुवाको हिम्मत छैन छोरा । म मेरी छोरीको बलात्कार आफ्नै आँखा अगाडि भएको हेर्न सक्दिनँ, तँप्रति केही गुनासो छैन । दिनहुुँ अपमान सहेर जिउँदै मरिसकेका हामीले आज यो श्वासलाई पनि यहीँ छाड्ने निर्णय गर्‍यौँ । सक्छ्स् भने माफ गरिदे हामीलाई ।”
मर्नुभन्दा अगाडि मेरो परिवारले छाडेको अन्तिम नासो यो हो महोदय ।
अब हजुर आफै भन्नुहोस् म कहाँ जाउँ न्याय खोज्न ? को दोषी छ यो आत्महत्या देखिने हत्यामा ? म, समाज, हजुर या यो कानुन ? अझैपनि दिनहुँ गाउँ-समाज र टोल टोलमा बलात्कार हुन्छ, आखिर किन ? यसलाई रोक्न किन सकिरहेको छैन हाम्रो कानुनले ? बलात्कृत नारीले किन समाजमा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सक्दैनन् ? आफ्नै बाबुबाट छोरी, मामाबाट भान्जी, दाजुबाट बहिनी, शिक्षकबाट विद्यार्थी बलात्कृत हुन्छन् यहाँ, २-४ वर्षका बच्चा समेत अछुतो छैनन् बलात्कारबाट । किन यति कठोर र क्रूर बन्दैछ मानव ? रक्षकको रुपमा दिनदिनै राक्षस बनिरहेको छ मान्छे । कतिपय बलात्कारका घटना बद्नामी हुन्छ भन्ने कारणले घरभित्रै, परिवारभित्रै अनि समाजभित्रै लुकाइन्छ । ३-७ वर्षको जेल सजाय, त्योपनि दिन र रात गनेर, अझै त्यसमाथि केही पैसाको बिटो फाल्दा सजिलै छुट्छ्न बलात्कारीहरु । अनि किन मौलाउँदैन त यो अमानवीय काम ? केही निर्दोषहरु पनि बलात्कारको अभियोगमा फस्छ्न्, जसको संख्या एकदमै न्यून छ ।
म केही वर्षपछि यहाँबाट त निस्किउँला तर म बलात्कारीको पगरी बोकेर यो समाजमा बाँच्न भने पक्कैपनि सक्दिनँ । म चाहन्नँ मेरोजस्तै अरुको पनि परिवार तहसनहस होस् । बलात्कारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराधलाई जरैदेखि हटाउन केही ठोस कदम चाल्न जरुरी छ, महोदय । बलात्कारको निस्पक्ष छानबिन हुनु जरुरी छ ता कि कोहीपनि निर्दोष कारबाहीमा नपरोस् । मेरो कानमा आजपनि अदालत जाँदा ती महिला अधिकारकर्मीहरुको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने चर्को स्वर गुञ्जिरहन्छ । त्यस दिन म अदालतमा कराई-कराई भनिरहेको थिएँ, “म निर्दोष छु, मैले न्याय पाउनुपर्छ।” तर आज, जब समाजले मलाई बलात्कारी भनेर चिनी नै सकेको छ; हजुरसमक्ष त्यो गल्ती सुधार्ने अर्को मौका छ । म मेरो बुवाजस्तै बहादुर बन्न चाहन्छु र देशमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नपनि । बलात्कारलाई जरैदेखि फाल्न अनि मलाई न्याय गर्न हजुरले यो कदम उचाल्नैपर्छ । त्यसैले, आज फेरि एकपटक म चिच्याई चिच्याई भनिरहेको छु,
“हो, म बलात्कारी हुँ, मलाई फाँसी दे सरकार !”
“हो, म बलात्कारी हुँ, मलाई फाँसी दे सरकार !!”
“हो, म बलात्कारी हुँ, मलाई फाँसी दे सरकार !!!”
– फाँसीको आशमा बसेको एउटा कैदी !
समास्या वासना ! समाधान वासना !